थकाइ लाग्छ ? त्यसो भए यसो गर्नुस् | NepalDut
थकाइ लाग्छ ? त्यसो भए यसो गर्नुस्
मको चक्करमा धेरैले पानी पिउन भुल्छन्। तिखा लाग्नु भनेको शरीरले पानीको मात्रा असाध्यै कम महसुस गर्नु हो। त्यसैले तिर्खा नकुरेर पानी पिइरहन जरुरी हुन्छ। खेल चिकित्सक गडसन भन्छन्, ‘अक्सिजन र पोषक तत्व मांशपेशीमा पु¥याउन पनि पानीको जरुरी छ।’ यति मात्रै होइन, पानीको कमीले रगत बाक्लो बनाउँछ। मुटलाई कुशलतापूर्वक रगत पम्प गर्न रगतमा पानीको मात्रा पर्याप्त हुन जरुरी हुन्छ।
शरीरका लागि ईन्धन हो। जस्तो गाडीको इन्जिनमा शुद्ध तेल प¥यो भने सहज ढंगले कुद्छ। त्यसैगरी मानव इन्जिनमा पनि ईन्धन सफा पर्नुपर्छ। विशेष गरी काम गरेर थाकेको र भोकाएको अवस्थामा खानेकुरा खाँदा होस पुर्याउनुपर्छ। दिउसोको खाजामा एकदमैं धेरै तरल पदार्थ पाइने खाजा खाँदा थकाइ कम हुन सक्छ। मासुजन्य र कार्बाेहाइडेड अधिक भएको खाजाले भोक त मेट्छ तर थकाइ बढाउन सक्छ।